တစ်ချိန်ကဘောလုံးသမား အခုတော့ နည်းပြများ အပိုင်း(၁)
13 Oct 2018 . 11:43 PM
ဘောလုံးလောကမှာ ကစားသမားဘ၀ကနေ အနားယူပြီးရင် နည်းပြလောကထဲကိုဝင်ရောက်တာဟာ သိပ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်က ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ကစားသမား တော်တော်များများဟာ လက်ရှိမှာတော့ နည်းပြလောကထဲကို ၀င်ရောက်နေကြပါပြီ။ သူတို့တွေဟာ နည်းပြဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုရမလားဆိုတာ မသေချာပေမယ့် ကစားသမားဘ၀က ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ခြင်းကို ခံနေရသူတွေပါ။ ဒါကြောင့် ပရိသတ်တွေအတွက် တစ်ချိန်ကဘောလုံးသမား အခုတော့ နည်းပြများ အပိုင်း(၁)ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ဗီအဲရာ Vieira
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဂန္ထ၀င်ကစားသမား ဗီအဲရာ Vieira ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲက နည်းပြလောကထဲကိုဝင်ရောက်နေခဲ့တာပါ။ ဗီအဲရာဟာ နည်းပြဘ၀အစမှာ New York City အသင်းကို တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ပြင်သစ်ကလပ် နိုက်စ်အသင်းကို တာဝန်ယူကိုင်တွယ်နေပါတယ်။ ဗီအဲရာရဲ့ နည်းပြဘ၀စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ လက်ရှိအချိန်ထိ ထင်သလောက် အားရစရာမကောင်းသေးတာကြောင့် ထိပ်တန်းနည်းပြဖြစ်လာမှာမလားဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဂျာရတ် Gerrard
လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဂန္ထ၀င်ကစားသမား ဂျာရတ် Gerrard ဟာ နည်းပြလောကထဲကို ရောက်ရှိနေတာ ပူပူနွေးနွေးပဲရှိပါသေးတယ်။ ဂျာရတ်ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ စကော့တလန်နာမည်ကျော် ရိန်းဂျားစ်အသင်းကို တာဝန်ယူနေပြီး ရလဒ်ကောင်းတွေရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ထားတာကြောင့် အနာဂတ်မှာ ထိပ်တန်းနည်းပြဖြစ်လာဖို့ အလားအလာကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားသူလို့ ပြောရမှာပါ။ ဂျာရတ်ဟာ လက်ရှိအချိန်ထိ ရိန်းဂျားစ်အသင်းကို ပွဲပေါင်း(၂၀)ကိုင်တွယ်ထားပြီး (၁၁)ပွဲနိုင် ၊ (၇)ပွဲသရေ ၊ (၂)ပွဲရှုံးရလဒ်ရရှိထားသလို နိုင်ပွဲရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ (၅၅. ၀၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိထားပါတယ်။
(၃) လမ်းပတ် Lampard
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမား လမ်းပတ် Lampard ဟာလည်း နည်းပြလောကထဲကို ရောက်ရှိနေတာ ပူပူနွေးနွေးပဲရှိပါသေးတယ်။ လမ်းပတ်ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ် ဒါဘီအသင်းကို ကိုင်တွယ်နေင်္ပြီး လိဂ်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ မန်ယူအသင်းကို အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့အထိ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကို ပြသခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပတ်ဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းကို ပြသထားတာကြောင့် အနာဂတ်မှာ ထိပ်တန်းနည်းပြဖြစ်လာမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ်။
Photo: CryptoCashEasy.com EN , MK Bet 24/7 , SLA News Planet , Goal.com
တဈခြိနျကဘောလုံးသမား အခုတော့ နညျးပွမြား အပိုငျး(၁)
ဘောလုံးလောကမှာ ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူပွီးရငျ နညျးပွလောကထဲကိုဝငျရောကျတာဟာ သိပျပွီးထူးဆနျးတဲ့ အရာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ တဈခြိနျက ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောကစားသမား တျောတျောမြားမြားဟာ လကျရှိမှာတော့ နညျးပွလောကထဲကို ဝငျရောကျနကွေပါပွီ။ သူတို့တှဟော နညျးပွဘဝမှာ အောငျမွငျမှုရမလားဆိုတာ မသခြောပမေယျ့ ကစားသမားဘဝက ကွီးမားတဲ့ အောငျမွငျမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားစောငျ့ကွညျ့ခွငျးကို ခံနရေသူတှပေါ။ ဒါကွောငျ့ ပရိသတျတှအေတှကျ တဈခြိနျကဘောလုံးသမား အခုတော့ နညျးပွမြား အပိုငျး(၁)ကိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျး ဂန်ထဝငျကစားသမား ဗီအဲရာ Vieira ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈထဲက နညျးပွလောကထဲကိုဝငျရောကျနခေဲ့တာပါ။ ဗီအဲရာဟာ နညျးပွဘဝအစမှာ New York City အသငျးကို တာဝနျယူကိုငျတှယျခဲ့ပွီး လကျရှိမှာတော့ ပွငျသဈကလပျ နိုကျဈအသငျးကို တာဝနျယူကိုငျတှယျနပေါတယျ။ ဗီအဲရာရဲ့ နညျးပွဘဝစှမျးဆောငျရညျဟာ လကျရှိအခြိနျထိ ထငျသလောကျ အားရစရာမကောငျးသေးတာကွောငျ့ ထိပျတနျးနညျးပွဖွဈလာမှာမလားဆိုတာကိုတော့ စောငျ့ကွညျ့ကွရဦးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
(၂) ဂြာရတျ Gerrard
လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျး ဂန်ထဝငျကစားသမား ဂြာရတျ Gerrard ဟာ နညျးပွလောကထဲကို ရောကျရှိနတော ပူပူနှေးနှေးပဲရှိပါသေးတယျ။ ဂြာရတျဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ စကော့တလနျနာမညျကြျော ရိနျးဂြားဈအသငျးကို တာဝနျယူနပွေီး ရလဒျကောငျးတှရေရှိအောငျ စှမျးဆောငျထားတာကွောငျ့ အနာဂတျမှာ ထိပျတနျးနညျးပွဖွဈလာဖို့ အလားအလာကောငျးတှပေိုငျဆိုငျထားသူလို့ ပွောရမှာပါ။ ဂြာရတျဟာ လကျရှိအခြိနျထိ ရိနျးဂြားဈအသငျးကို ပှဲပေါငျး(၂၀)ကိုငျတှယျထားပွီး (၁၁)ပှဲနိုငျ ၊ (၇)ပှဲသရေ ၊ (၂)ပှဲရှုံးရလဒျရရှိထားသလို နိုငျပှဲရာခိုငျနှုနျးအနနေဲ့ (၅၅. ၀၀) ရာခိုငျနှုနျးရရှိထားပါတယျ။
(၃) လမျးပတျ Lampard
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျကစားသမား လမျးပတျ Lampard ဟာလညျး နညျးပွလောကထဲကို ရောကျရှိနတော ပူပူနှေးနှေးပဲရှိပါသေးတယျ။ လမျးပတျဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ လိဂျခနျြပီယံရှဈကလပျ ဒါဘီအသငျးကို ကိုငျတှယျနွငျေ်ပီး လိဂျဖလားပွိုငျပှဲမှာ မနျယူအသငျးကို အိုးထရကျဖို့ဒျမှာ အနိုငျယူခဲ့တဲ့အထိ စှမျးဆောငျရညျကောငျးတှကေို ပွသခဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။ လမျးပတျဟာ အတိုငျးအတာတဈခုထိ စှမျးဆောငျရညျကောငျးကို ပွသထားတာကွောငျ့ အနာဂတျမှာ ထိပျတနျးနညျးပွဖွဈလာမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးနပေါတယျ။